विदेशमा पढेका ८८ प्रतिशत डाक्टर फेल ! – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, असार ३२ । नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले मेधावी विद्यार्थी पनि डलर तिरेर विदेश जान बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ । तर, विदेश कस्ता विद्यार्थी गएका छन् ? मेडिकल पढ्ने योग्यता भएका कि पैसा तिर्ने क्षमता भएका भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ ।
एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएकाहरूलाई बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिन्छ । तर, विदेशमा कस्ता विद्यार्थी गएका छन् र कस्तो शिक्षा लिएर आएका छन् भन्ने प्रस्ट पार्न टेबलमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण नै काफी छ । गत वर्ष १६ मंसिरमा काउन्सिलले लिएको परीक्षामा विदेशमा एमबिबिएस पढेका ५२६ डाक्टर सहभागी भएकोमा ४६३ जना असफल भए ।
त्यस्तै, बिडिएस पढेका ४१ जना सहभागी भएकोमा ३७ जना असफल भए । यसरी एमबिबिएसतर्फ ८८ प्रतिशत र बिडिएसतर्फ ९० प्रतिशत डाक्टर काउन्सिलको परीक्षामा असफल भएका छन् ।विदेशमा मेडिकल पढ्न जाने विद्यार्थी दुईथरी हुन्छन् ।
नेपाल सरकारको अथवा सम्बन्धित देशको छात्रवृत्ति पाएर पनि विद्यार्थी विदेश जान्छन् । तर, यसको संख्या सीमित छ । नेपालमै मेडिकल साइन्स पढ्न पनि प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनुपर्छ । योग्यताक्रममा पछि परेका तर अभिभावकले पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई विदेशको विकल्प खुलै रहन्छ । यसरी विदेश जाने धेरैजसो विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिन्छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: ८८ प्रतिशत डाक्टर फेल, डाक्टर फेल
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना
आइपीएल २०२०ः यी हुन् आरसीबीले उपाधि जित्ने प्रमुख ४ आधार
गृहमन्त्री थापाले भने, ‘सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर एमसीसी पास गर्नु हुँदैन’